के नेपालले अफगानिस्तानको यात्रालाई पछ्याउन सक्ला? - EAAWAJ (इ-आवाज)
के नेपालले अफगानिस्तानको यात्रालाई पछ्याउन सक्ला?
१९९५ मा स्थापना भएको अफगानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशनले २००१ मा आईसीसीको मेम्बर बन्यो। मेम्बर बनेकै १६ सालमा आईसीसीको फुल मेम्बर बन्यो।
सन १९९६ मा नेपाल आईसीसीको मेम्बर बनेको थियो। नेपाल अफगानिस्तान भन्दा पहिला आईसीसीको मेम्बर पाएको टिम डिभिजन २ मा लडिराछ। आज त्यही अफ्गानिस्तानले गर्दा नेपालले यु१९ विश्वकप गुमायो। भारत जस्तो टिमलाई हराउदै यु१९ एसियाकपको फाईनल पुग्ने सपना सपनामै सिमित राखि दियो अफ्गानिस्तानले। त्यहि अफ्गानिस्तानले यु१९ एसिया कपको च्यामपियन बन्दै नयाँ इतिहास लेखेको छ।
संँगै क्रिकेट खेल्न सुरु गरेको नेपाल र अफ्गानिस्तान तर अहिले दुबै देशको क्रिकेट विकास हेर्ने हो भने आकाश पातलको फरक छ। फरक हुनुका केहि कारणहरु यी हुन सक्छन्।
सन् २००८ मा नेपाललाई आइसीसी डिभिजन ५ श्रेणीको प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा हराएर अफगानिस्तान डिभिजन ४, डिभिजन ३ हुंदै विश्वकप छनोटसम्म पुग्यो। नेपाल पछि छुट्यो । आइसीसीले टोलीले गरेको प्रगतिको आधारमा रकम निकासा गर्ने हुनाले अफगानिस्तानले चाँडै नै त्यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पायो, जसलाई युवा खेलाडीहरुको विकासमा प्रयोग गरियो । मैदान भित्रको खेल र मैदान बाहिरको प्रशासनमा यी दुई देश बीच दूरी देखिन थाल्यो । युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तानको सरकारले नै क्रिकेटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो ।
अहिले अफगानिस्तानमा २ ठूला क्रिकेट रंगशाला निर्माण भइसकेका छन् भने ५ वटा नयाँ रंगशालाको निर्माण पुरा हुने क्रममा छ । यता नेपालले १५ वर्ष देखि मूलपानीको एउटा खेल मैदान पनि पूर्ण रुपमा तयार पार्न सकेको छैन । केहि दिन अगाडी मुलपानी मैदानमा नेपाली पुर्व खेलाडी र हालका खेलाडी विभाजन गरी उद्घाटन खेल राखिएको थियो। तर मैदानको उद्घाटन गरे पनि मैदान पुर्ण रूपमा तयार भएको छैन् ।
नेपाली क्रिकेट भने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कब्जा गर्ने स्वार्थको खेल बनिदिदा नेपाल क्रिकेट संघ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध भोगिरहेको छ । नेपाल क्रिकेट संघलाई आइसीसीले दिएको हिसाब समेत बुझाउन नसके थप सहायता रोक्का हुने अवस्थामा पुगेको छ। क्रिकेट संघमा राजनीति यतिसम्म हावी भयो कि उनीहरु आफूले के पाउन सक्छु भन्ने साना साना कुरामा अल्झिन पुगे। बजेट भित्राउन सक्नुपर्नेमा भएको बजेटको प्रयोग त के हिसाब पनि देखाउन सकेनन् ।
व्यवस्थापन सुधारिएर खेलाडीहरुले नियमित क्रिकेट खेल्न पाउछ भने नेपालले अबका केहि बर्षमा एक दिवसीय स्टाटस् पाउदै नेपालले नि अफ्गानिस्तानको लेभल भेटाउन सक्छ। भारत जस्तो टिमलाई युवा टिमले हराउदै प्रमाण गरिदियो कि क्रिकेटमा असम्भव केहि छैन् भनेर।
लेखक – निम पुन
← एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा रद्द, प्रदर्शनमा उत्रिए परीक्षार्थीहरू ।
तेस्रो नेपालगन्ज म्याराथन दौड हुँदै →